Daawo Muuqaal: Layaab Wiil yar oo sidii Eeyga oo kale u yeerayo marka uu neefsanayo | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Arimaha Bulshada » Daawo Muuqaal: Layaab Wiil yar oo sidii Eeyga oo kale u yeerayo marka uu neefsanayo
Daawo Muuqaal: Layaab Wiil yar oo sidii Eeyga oo kale u yeerayo marka uu neefsanayo
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 17-08-16 10:42 AM Badanaa dadka qaar ayaa la kulmo dhacdooyin la yaab leh inta ay noolyihiin, mararka qaar waxaa dhacdo in shil la yaab leh ay dadka la kulmaan kuwaas oo sababo in la geeyo isbitaal.
Canug yar oo u dhashay dalka Mareykanka ayaa la dhigay Isbitaal kadib markii uu cunay haraa kasoo haray cunno oo uu cunayey Eey ay lahaayeen reerkiisa, Wiilkan yar ayaase bilaabay inuu u dhawaaqo sida Eeyga oo kale marka uu neefsanayo.
Muuqaal laga soo qaaday wiilkan yar ayaa lasoo dhigay bogga bulshada waxaase durba daawatay muuqaalkan Malaayiin qof iyada oo uu noqday mid si dhaqsi ah ku fiday.
“Maxaa laguu keenay qolka gar gaarka deg dega” Haweeney joogtay Camera da gadaasheeda ayaa weydiisay canugan lagu magacaabo Anthony.
“Waxaan cunay haro kasoo hartay Eey ga” ayuu ugu jawaabay isaga oo marka uu neefta qaadanayo laga dareemayo inuu u dhawaaqayo sidii Eeyga oo kale.
Halkan Hoose ka daawo Muuqaalka Wiilkan yar